China Mbadamba ụrọ PC Turnkey PCB Kọmputa Mgbakọ rụpụta na Factory | KAISHENG PCB
PCBFuture e abuana ke PCB n'ichepụta. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị anọwo na-azụ ahịa dị iche iche ma na-anapụta atụmatụ dị elu PCB dị elu multilayer dị elu, na-echebara ihe nrụpụta ụwa na ule chọrọ.
Mkpuchi ọla: HASL Duru n'efu
N'ígwé: 8 Layer PCB
Isi ihe: Akwa Tg 170 FR-4
Mkpuchi ọla: HASL Duru n'efu Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 8 Layer PCB
Isi ihe: Akwa Tg 170 FR-4 Asambodo: SGS, ISO, RoHS MOQ: Mba MOQ
Soldị Solder: RoHS Dabara Otu-Kwụsị Ọrụ: PCB Manufacturing And Turnkey PCB Assembly Ule: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Keywords: PCB Assembly, PCB fabricgha, chọrọ, PCB Assembly Manufacturers, Cheap PCB Assembly, Printed Circuit Board Assembly Companies
Na PCBFuture, anyị na-agba mbọ na-arụ ọrụ aka na ndị ahịa anyị. Si prototyping ka zuru-ọnụ ọgụgụ mmepụta, anyị bụ ndị na ndọtị nke ndị ahịa ike. Anyị na-emezi mmemme anyị na usoro anyị mgbe niile iji zute ma ọ bụ gafere ihe ndị ahịa anyị chọrọ na-aga n'ihu.
PCBFuture agba mbọ na mmejuputa usoro njikwa njikwa ka ngwaahịa ya na ọrụ ya wee zute ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
Gịnị mere anyị PCB Assembly na PCB n'ichepụta ọrụ?
Amụma anyị dị mma bụ ịnye ngwaahịa na ọrụ dị mma iji zute ihe ndị ahịa chọrọ na atụmanya site na Ahịa, Ogo, nzipu oge na Ọrụ.
Anyị na-akwado 24-hour online quote na ngwa ngwa 12-hour ọrụ maka PCB prototype. Ọkachamara na mmepụta nke PCB otu akụkụ, PCB nwere akụkụ abụọ, ọtụtụ PCB, aluminum PCB na PCB na-agbanwe agbanwe.
Anyị na-agba mbọ iji na-egbo mkpa nke ndị ahịa anyị si dị iche iche ọrụ na okwu nke àgwà, nnyefe, na-eri-irè na PCB ngwọta. Ọzọkwa nye pụrụ iche ahaziri ọrụ. N'ikpeazụ, PCBFuture hazie PCB dị ka mmefu ego gị iji chekwaa oge gị iji merie ahịa ahụ.
Anyị nwere ike ịnye ọrụ n'okpuru:
otu PCB kwadoro
ihu abụọ PCB
multi-oyi akwa PCB
Ule na mmemme
Ndenye uzo PCB nzukọ
Nzukọ Turnkey PCB
Low olu PCB nzukọ
Mid olu PCB nzukọ
Ngwa nke E Bipụtara Circuit Boards:
1. Lighting Ngwa
Ọkụ na PCB sitere na aluminom dị ezigbo mma maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ.
2. Egwuregwu Elektrọnik
Eletrọniki ndị ahịa bụ ngwaọrụ anyị na-eji kwa ụbọchị, dị ka smartphones ma ọ bụ kọmputa. Ọbụna ụdị kachasị ọhụrụ nke ngwa nju oyi na-agụnyekarị ihe ndị dị na kọmputa.
3. Ngwaọrụ ahụike
Maka ngwa ahụike, achọrọ obere ngwugwu iji mezuo nha chọrọ maka ihe eji etinye ma ọ bụ ihe nlele ụlọ mberede. Ya mere, PCB ahụike na-abụkarị ọkachamara PCBs dị elu, nke a na-akpọkwa HDI PCBs. Medical PCB nwekwara ike mere na mgbanwe isi ihe, ikwe PCB ịgbanwe n'oge were, nke dị oké mkpa maka ma esịtidem na mpụga ọgwụ na ahụ ike.
4. Industrial Ngwa
5. Automotive Ngwa
6. Aerospace Ngwa
Nlekọta maka imepụta bọọdụ sekit dị elu:
1. Njigide impedance siri ike, njikwa akara akara zuru oke siri ike, na njedebe zuru oke gbasara 2%.
2. N'ihi ojiji nke efere pụrụ iche, njigide nke nkwụ ọla kọpa PTH adịghị elu. N'ozuzu, achọrọ akụrụngwa ọgwụgwọ plasma ka ọ na-adaba n'ime oghere na elu iji mee ka adhesion nke PTH copper na solder mask ink.
3. Ekwela efere tupu ịgbado ọkụ na-eguzogide ọgwụ, ma ọ bụghị na nrapado ahụ ga-abụ ezigbo ogbenye, enwere ike iwepu ya na micro-corrosive powder.
4. Imirikiti mpempe akwụkwọ bụ ihe PTFE. A ga-enwe ọtụtụ ihe siri ike n’ọnụ mgbe ndị na-akụ egweri, nke chọrọ ndị na-egwe ọka na-egwe ọka.
5. Igwe eletrik sekọndrị dị elu bụ bọọdụ sekit pụrụ iche na ikuku electromagnetic dị elu. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike ịkọwa ugboro ugboro dị elu karịa 1 GHz.
Njirimara ya, izi ezi na teknụzụ teknụzụ na-achọsi ike. A na-ejikarị ya na usoro mgbochi nkụkọ ụgbọala, sistemụ satịlaịtị, sistemụ redio na mpaghara ndị ọzọ.
Nke gara aga: Smart TV Box PCB Assembly Isi
Osote: Turnkey Cheap PCB Assembly
Kọmputa Assembly PCB
Kọmputa PCB Assembly
Eletrọniki PCB Assembly
Eletrọniki Turnkey PCB
Ugbo ala GPS Tracker Circuit PCB Assembly